Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Eyona mikhwa yendlela yokuphila esempilweni ka-2022
19 imiz efundwayo
Emva kweminyaka esele siyihambile sonke (xa sijonge kuwe 2020 kunye no 2021) kubonakala ngathi uninzi lwabantu luyavuma ukuba banethemba elikhulu ku-2022. kodwa ngelishwa akukho mntu unako ukulawula isantya sokuba ihlabathi libuyele esiqhelweni. Kwaye ke, sonke kufuneka sizenzele ukwaneliseka kunye nokukhula kwethu ngo-19 nokuba zeziphi izinto zangaphandle ezidlalayo.
Indawo entle yokuqalisa ukuqinisekisa ukuba unyaka owonwabileyo, onemveliso, ozivavanyayo kunye nokukhula komntu kukuseka indlela yokuphila esempilweni; kuba xa usebenza ngokwakho kuba nzima kakhulu ukuntywiliselwa phantsi kobunzima beemeko ngaphandle kolawulo lwakho. Endaweni yoko, unokugxila kuko konke okuhle ebomini bakho, iindlela ozilandelayo ezikuzisela impilo kunye nokwaneliseka, kunye nokukhula kwakho ohamba ngako.
Xa bebuzwa amacebiso abo angcono kwindlela yokuphila enempilo ka-2022, ezi CEO kunye nabanini bamashishini banike iingcebiso ezikhanyiselweyo. Ke bamba isicwangcisi sakho kwaye uthathe amanqaku malunga neendlela zokuphila iinkokeli zoshishino eziphumeleleyo zincomela unyaka ongcono noqaqambileyo ngaphambili.
Gxininisa Kwizinto Ezikhuthazayo
Umseki wekliniki ye-allergies ekhaya iCleared Technologies inobunzima malunga nesiphumo esiluncedo kakhulu esinokubakho kwimeko yakho yempilo. Ucebisa ukuba indawo yokuqala ojonge kuyo ukwenza utshintsho lwendlela yokuphila esempilweni kungaphakathi ngokususa indlela ocinga ngayo isuke kwi-negativity ejikeleze wena ukuya kwi-positivity.
“Elona cebiso lilungileyo lokwenza utshintsho lwendlela yokuphila esempilweni kunyaka ozayo kukhetha ukugxila kwizinto ezilungileyo ezikungqongileyo. Ngexesha lobomi esikuyo ngokudibeneyo, kunokubonakala kulula kunanini na ngaphambili ukubona i-negativity kunye noloyiko kuyo yonke indawo ekujikelezileyo, kodwa ungalibali ngazo zonke izinto ezilungileyo ezenzekayo kwihlabathi ngokubanzi nakubomi bakho bomntu. Oku kuwela kwithiyori yokuba ubona into ogxile kuyo; ngokwenzululwazi, inxalenye yengqondo yakho enoxanduva lwento ebizwa ngokuba yiReticular Activating System, kodwa nangaphandle kwamagama enzululwazi inyani isamile ukuba ubukhulu becala sidala ubunyani behlabathi elisingqongileyo ngokubona into esigxile kuyo. Ukuba uyazivumela ukuba uxakeke kumzabalazo kunye neziganeko ezimbi ezikungqongileyo ziya kubuthatha ubomi bakho. Kodwa ukuba ugxila kwizinto ezilungileyo ingqondo yakho iya kutshintsha kwaye uya kuziva wonwabile kwaye ukhululekile. Kuya kufuneka uvuke ngenkuthalo yonke imihla kwaye ukhethe i-positivity. Akulula kodwa kuyakwenza umahluko omkhulu kwindlela obona ngayo (kwaye ke ukho) kwihlabathi,” utshilo uGqr. Payel Gupta, i-CMO kunye noMseki we- Icinyiwe.
Yenza umthambo wemihla ngemihla
Kukangaphi uxelelwe ngeenzuzo zokuzilolonga? Ininzi kakhulu, kodwa okukhona usiva into ngokubanzi ithetha ukuba yinto ekufuneka uyiphulaphule ngokwenene. Umthambo wemihla ngemihla ukhokelela kwiingenelo ezininzi zempilo, kuquka ukulala ngcono, amandla aphucukileyo, ukulawula ubunzima, uxinzelelo lwegazi olusezantsi, kunye nentliziyo eyomeleleyo.
“Ndikwenza usukelo lwam lobuqu ukuqinisekisa ukuba ndiyazilolonga yonke imihla. Ezinye iintsuku zixakekile kwaye ukufumana ixesha lokuzilolonga kunzima kodwa ndisacwangcisa ixesha lokuhamba. 'Ukuzilolonga' akuthethi ukuya kwindawo yokuzivocavoca okanye ukulandela isicwangciso esingqongqo sokuzilolonga. Ngamanye amaxesha ezona ndlela zincinci zokuzilolonga zinokuba zezona zonwaba, njengokuhambahamba phandle umzekelo. Imithambo yemihla ngemihla ikugcina ukwimeko entle ngokwasemzimbeni ngokomeleza izihlunu zakho kodwa ikwanceda nengqondo yakho ngokuthomalalisa uxinzelelo. Ngoku sele isisisiqhelo, ndijonge phambili kwimisebenzi yam yemihla ngemihla kuba lixesha lokuba ndicime ingqondo yam yomsebenzi, ndijikeleze, ndizive ngathi kukho into endiyenzele eyakhayo kwimpilo yam,” utsho uHeidi Streeter, uMseki. ye IHolide yaseSt.
Ukuxhathisa Imihla Embi
Umseki wekliniki yokubuyisela iinwele uJae Pak ukhumbuza ngokubaluleka kokuzibamba kumgangatho ophezulu wesimo sengqondo kunye nengqondo; ucebisa ukuba unciphise iintsuku zakho ezimbi ezingenamveliso ngokungazivumeli ukuba uzithobe kwi-negativity.
“Enye isaci sobomi esiye sandinceda kakuhle licebiso endakha ndalinikwa lokuba ndingaze ndibe nemini embi. Ngokuqinisekileyo, kuya kuhlala kukho iimeko ezinzima kuya kufuneka ungene kwaye ngamanye amaxesha ubomi bunzima ngokwaneleyo ukuba ufuna ukuzithoba kwi-negativity, okanye ubhale usuku lonke uziva uphantsi. Kodwa khawucinge indlela obuphoswa ngayo bubomi xa uzivumela ukuba unikezele kwiimini ezimbi! Nokuvumela intsasa yakho okanye inxalenye yosuku lwakho uzive ngathi lusuku olubi kunciphisa ixesha elixabisekileyo onokulichitha ukonwabela ubomi obukujikelezile. Ke xhathisa iintsuku ezimbi ngamandla akho onke kwaye ukhethe ulonwabo endaweni yoko, utshilo uJae Pak, uMseki we Jae Pak MD Medical.
Kanye njengokuba ukushukumisa umzimba kubalulekile, ngoko ke nokondla umzimba wakho ukutya okuwubasayo. I-70% yezidlo zaseMelika ngokubanzi ziqulunqwe ngokutya okucutshungulwayo; kuba kulula kakhulu kwaye kuqhelekile ukulandela le nyani, kufuneka uzithathele ingqalelo izithako ozifakayo emzimbeni wakho. Ngamanye amaxesha ukufumana isondlo esaneleyo kufuna ukwenza ukhetho olunzima lokuthi hayi ekutyeni okuthile kunye nokutsalela kwiinketho ezingcono. Umseki, i-CEO, kunye nentloko yoyilo lwe-Unico Nutrition incoma ukubeka phambili ukutya okunempilo kwi-2022 enempilo.
“Kungothusa ukuba ujonga ngokwenyani iinyani malunga nokuba bangaphi abantu baseMelika abafumana ngokwaneleyo iivithamini kunye nezondlo abazidingayo ukuze babe sempilweni. Uninzi lwabantu luyasilela kakhulu ekuzondleleni izithako ezikhuthaza imizimba esebenza ngokufanelekileyo. Ngelixa uninzi lwethu alusoze luwuqonde ngokwenene ummangaliso ongemva kwendlela izithako ezithile ezinceda ngayo iinkqubo zethu zangaphakathi zisebenze kwaye yintoni kanye imizimba yethu eyenza ukunyibilikisa izondlo, sinokufunda indlela yokutya ngokufanelekileyo. Yenza i-2022 ibe ngunyaka wesondlo, nokuba sele usitya kakuhle okanye hayi. Kutheni ungagxininisi ekufundeni ngakumbi malunga nokuba zeziphi iivithamini kunye neeminerali ezifanelekileyo ezidlala indima entle kwimpilo yakho kwaye usebenze ukuqinisekisa ukuba ufumana ngokwaneleyo? Nokuba weliphi inqanaba okulo ngoku, ungabeka phambili ukutya okuqinileyo. Iziqu zenu zangoku nezexesha elizayo ziya kukubulela, utshilo uLance Herrington, uMseki, i-CEO, kunye neNtloko yoYilo. I-UNICO YOKUDLA.
Zijikeleze Ngabantu Abakukhuthazayo
Abantu ebomini bakho babumba indlela elibonakala ngayo ihlabathi lakho, bunefuthe kakhulu bubukho babo bakungqongileyo. Mhlawumbi uyazi ukuba abantu banokuqala ukwamkela izimo zengqondo kunye neendlela zabo bachitha ixesha elininzi kunye nabo, athi umongameli kunye nomseki weMicrodermaMitt banokuchaphazela imikhwa enempilo yonyaka wakho omtsha.
“Ubomi bufutshane kakhulu ukuba ungachitha iintsuku nabantu abangalifanelanga ixesha lakho. Uyabazi ukuba bangoobani; ungaziva ngokubanzi ngoko nangoko indlela abakutsalela phantsi kwityhefu kunye negativity. Ixesha lakho elixabisekileyo, elixabisekileyo kufuneka lichithwe kuphela nabantu abakuphakamisayo nabakukhuthazayo kwaye abaya kuba lapho ngamaxesha akho anzima. Uyayazi intetho ethi 'ungumntu ochitha ixesha naye' kwaye ngokuqinisekileyo ivakala iyinyani. Okukhona uchitha ixesha nabantu abangabonisi uhlobo lomntu ofuna ukuba lulo, kokukhona uthatha ixesha elingakumbi ekubeni ngumntu ofanelekileyo. Ukuba ufuna unyaka ka-2022 osempilweni kufuneka ulumke nomntu omvumelayo ukuba angene kwiindawo zakho ezikufutshane,” utshilo uJudy Nural, uMongameli kunye noMseki we. IMicrodermaMitt.
Vulela Ubomi Bakho Ubutsha
Umseki kunye ne-CEO yeshishini lokugcina imithwalo i-Bounce incoma ukuba uzenzele ubomi obuvumela ukuzama izinto ezintsha. Umhlaba wakho unokuba mnandi ngakumbi xa uvula ingqondo yakho kumava amatsha kunye namathuba.
“Enye inkalo yobomi ezisa uchulumanco nenkuthazo kukufuna amava amatsha. Kunokuba uhlale kwindawo enye ngenxa yokuba ukhule kamnandi okanye ufumene inkqubo ekusebenzelayo, kubalulekile ukuzivumela ukuba uzame izinto ezintsha. Ukuba ufuna ukuzigcina ezinzwaneni zakho ngokuhlala uphonononga iindlela ezintsha, elona cebiso lam kuwe kukuba ungoyiki ukubona kwaye uzame izinto ezintsha. Yiba nomdla ngo-2022! utsho uCody Candee, uMseki kunye neCEO ye umda.
Fumana Ubuthongo obuhle
Ungalibali imfuneko yokulala kamnandi ebusuku! Iingcali zempilo zicebisa ukuba ulale iiyure ezisixhenxe ubuncinci ubusuku ngabunye ukuze usebenze ngokwengqondo nangokomzimba. Unokuziva iziphumo ezibi zokuphulukana neeyure ezimbalwa zokulala phantse kwangoko ngosuku olulandelayo, yiyo loo nto umlawuli webrand ye-Healist Naturals ecebisa ukuba wonke umntu abeke phambili ukulala ngo-2022.
“Ukuqinisekisa unyaka osempilweni ngo-2022 kufuneka ubeke phambili ukulala ngokwaneleyo. Ndicinga ukuba amaxesha amaninzi abantu abaqondi ukuba ingakanani na indima ebalulekileyo edlalwa kukulala kubomi bethu; xa ulala ngokwaneleyo ebusuku xa kuthelekiswa nokulala okuncinci kunokuba umzimba wakho udinga ufumana amanqanaba aphezulu amandla, ukucaca kwengqondo, ukuphucula isimo sengqondo kunye nembono, kunye nokusebenza kakuhle kweenkqubo zangaphakathi. Ngelixa ungacingi ukuba ubuthongo buphezulu kwiinjongo zakho zika-2022, khumbula ukuba unokubulela amanqanaba okulala okunempilo kwezinye izinto onokufuna ukuziphumeza ngo-2022: imveliso obufuna ukuyifumana emsebenzini? Unokubulela ubuthongo bakho obuhle bokucaca kwengqondo kunye nokuqhuba. Iiyure ezicetyiswayo zokulala zingaphezulu kwesixhenxe ngobusuku, ke qiniseka ukuba uyacwangcisa iintsuku zakho ukuvumela ixesha lokulala elindilisekileyo, utshilo uSarah Pirrie, uMlawuli weBrand. I-Healist Naturals.
UDylan Arthur Garber, umseki wenkampani encedisa ukuva i-Audien Hearing ucebisa ukuba uthathe ixesha lokufunda ukwandisa ulwazi lwakho kwaye akubonelele ngezixhobo ozidingayo ukuqhubela phambili ukuziphucula kwakho.
"Kukho izixa ezingapheliyo zokuziphucula komntu kunye neencwadi zokuzikhulisa phaya emarikeni ngoku, zombini iiklasikhi zecandelo lokuziphucula kunye nokukhutshwa okutsha. Ndincoma kakhulu ukuba nabani na ofuna ukutshintsha ubomi babo kunye nokudala imikhwa emihle basebenzise ubutyebi bolwazi olukhoyo ngoku. Awunyanzelekanga ukuba uzibekele umda kuhlobo lokuzinceda, okanye nakwinto engeyonyani; Ibali eliyintsomi linokuba yindlela yokuphepha emnandi. Ngapha koko, eyona ndlela ilungileyo yokubonisa ubukrelekrele kukufunda kakuhle,” utshilo uDylan Arthur Garber, uMseki-mseki we. Ukuva Audien.
Chitha Ixesha Nabantu Obathandayo
Iqela leshishini kwi-microbiome yokukhulisa isoda uphawu lwe-OLIPOP lixabisa ukubaluleka kokwakha ubomi obungqongwe ngabantu obathandayo. Imikhwa ngamanyathelo asebenzayo owathathayo de ibe yinto yesiqhelo, yiyo loo nto unokuba nenjongo malunga nokuchitha ixesha nabantu obathandayo ukubenza babe yinxalenye yobomi bakho rhoqo.
“Ukuphila ubomi obusempilweni kukuzenzela ixesha lokuchitha nabantu obathandayo. Akukho mntu ukwaziyo, okuxhasayo, okukhuthazayo, kwaye ubambe uxanduva njengabo bakuthandayo, ke ukubabandakanya ebomini bakho ayisosenzo sothando kuphela kodwa yindlela eqinileyo yokuqinisekisa ukuba uhlala usendleleni yokuba ngoyena mntu ubalaseleyo, "Utsho uSteven Vigilante, iNtloko yoPhuhliso loShishino olutsha, kunye noMelanie Bedwell, uMphathi we-E-commerce. OLIPOP.
Faka iProtheyini eyaneleyo ekutyeni kwakho
UJeff Goodwin, umlawuli wokuthengisa kunye ne-e-commerce yenkampani yezondlo ezicocekileyo i-Orgain ibonisa ukubaluleka kokufumana iprotheyini eyaneleyo ekudleni kwakho.
“Kwa-Organ sikholelwa ukuba amandla okutya okunesondlo, okucocekileyo anokukunceda uphile ubomi obusempilweni, obudlamkileyo, kungoko sikhuthaza wonke umntu ukuba atye iprotein eyaneleyo njengenxalenye yokutya kwabo; akunyanzelekanga ukuba kubenzima ukufumana iprotein eyaneleyo ngomgubo wethu, iishaki, kunye nokutshintshwa kwezidlo. Iprotheyini sisithako esinoxanduva lokomeleza ubunzima bemisipha yakho, ukulungisa izicubu zakho, kunye nokukhuthaza impilo yamathambo. Ukuba ufuna ukuba sempilweni ngo-2022 ngokuqinisekileyo sukutsiba amanqanaba eprotheyini yakho,” utshilo uJeff Goodwin, uMlawuli oMkhulu kunye noNtengiso wokuSebenza kunye noMlawuli we-E-Commerce. Ukuzuza.
Landela iModeli yoMsebenzi weHybrid
Ngamanye amaxesha ukuzinyamekela kakuhle kubonakala ngathi uzinike ukuguquguquka okungaphezulu kokuthatha 'ixesha lakho' ngexesha lomsebenzi. I-CEO ye-Outstanding Foods icebisa ukuba uvumele oku kujongeke njengokulandela imodeli yomsebenzi oxutyiweyo ukuze kubekho ixesha elaneleyo lokusebenza kunye nokuphumla ngaphandle kokuphazamiseka.
“Ukubandakanya ukuzinyamekela kwiiyure zakho zokusebenza kunokwenza unyaka ka-2022 ube sempilweni. Ukuthatha ixesha elibalulekileyo kuwe ngexesha lomsebenzi kunokukwenza ube nemveliso ngakumbi. Ndicebisa ukuzama imodeli yomsebenzi oxutyiweyo. Kusenokubakho 'iiyure ezingundoqo' kwinkampani yakho ukusuka kwi-12 ukuya kwisi-4 apho abasebenzi beza eofisini, bevumela iqela elipheleleyo ukuba libe khona kwiintlanganiso zobuso ngobuso kunye nentsebenziswano, emva koko ubavumele ukuba basebenze ekhaya, bezenzela ababo. ishedyuli yosuku lwabo lomsebenzi oluseleyo. Oku kukuvumela wena neqela lakho ukuba nidale ulungelelwaniso kubomi bomsebenzi oza kunceda wonke umntu ahlale enemveliso kwaye esempilweni, utshilo uBill Glaser, iCEO ye Ukutya okugqwesileyo.
Mamela iiAudiobooks ukuKhokela uhambo lwakho lobuqu
Enye yeendlela ezilungileyo zokutshintsha ubomi bakho kwaye utshintshe indlela ocinga ngayo kukuguqukela kubulumko bobulumko kunye namava obomi babanye abanobuchule. Iincwadi zokuzinceda kunye nokuziphucula yindlela entle yokufikelela kwizixhobo ozidingayo ukwenza utshintsho oluyimfuneko ebomini bakho. Kodwa ngenxa yokuba uxakekile kwaye awunalo ixesha lokuhlala phantsi nencwadi elungileyo, umseki kunye nomlawuli wemisebenzi kwiDijithali yesiThathu kuNxweme ucacisa ukuba iincwadi ezirekhodiweyo zinokungena lula kangakanani kubomi bakho ngexesha eliphantsi njengaxa uqhuba.
“Ndichitha malunga nemizuzu engama-45 ngemoto ukuya nokubuya emsebenzini suku ngalunye. Ndinokuchitha elo xesha ndimamele umculo okanye ndithethe unomathotholo, kodwa ndikhetha ukulichitha ndimamele iincwadi zoshishino kunye neencwadi zokuziphucula. Kule minyaka mibini inesiqingatha idlulileyo, ndimamele phantse ii-audiobook ezingama-40. Ezi ncwadi zindinike ukuqonda okumangalisayo malunga nendlela yokuqhuba ishishini lam kunye nokulola izakhono zam. Ndiyakwazi ukuphulaphula incwadi entsha ngeentsuku ezimbalwa, xa ndithelekisa nokufunda incwadi, nto leyo enokundithabatha ubuncinane inyanga okanye ezimbini, ukuba akudlulanga xesha lide, kuba ndinabantwana ababini abancinane ekhaya, andinakuze ndilifumane ixesha,” utsho uGeorge. UZlatin, uMseki-Msebenzi kunye noMlawuli weMisebenzi kwi Digital Third Coast.
Khumbula Ukuba Nombulelo
Ukuzikhathalela okunamandla kwehla kakhulu kwingqondo yakho kuba indlela ocinga ngayo inefuthe kwindlela oziva ngayo. Ukuze ube lolona hlobo lunemveliso nolusebenzayo kuwe, i-CEO ye-SnoopWall icebisa ukuba uqale usuku ngombulelo.
"Ndivuka kwaye ndiqale yonke imihla ngengcinga enye yokuqala: ukuba nombulelo ngobuninzi ebomini bam-usapho, abahlobo, inkampani, kunye nokunye. Akukho nto ilungileyo iza lula. Ukusebenza nzima kunye nokuzinikela kuhlala kunemivuzo. Ukuqala yonke imihla ngengcinga eyomeleleyo, eyakhayo yeyona ndlela ilungileyo yokukhaba suku ngalunye. Ndiyakholelwa ukuba ukucinga okulungileyo ngundoqo ekoyiseni yonke imiqobo, kwaye ndiyayisasaza le nto kwiqela lam. Kanye njengokuba i-negativity isosuleleka-cinga: i-apile enye ebolileyo ezantsi komphanda ekugqibeleni iya kubatshabalalisa bonke-injalo i-positivity. Khetha ukuba nethemba. Qaphela isimo sakho sengqondo kunye nendlela esibachaphazela ngayo abanye, "utshilo uGary Miliefsky, i-CEO ye SnoopWall.
Zibonise uBomi njengoMntu ofuna ukuba nguye
U-Lauren Kleinman, umseki weqonga leengcebiso zemveliso UHlelo loMgangatho, ucebisa ukuba indlela eya kwi-2022 enempilo kwaye ukuya phambili kukuzama ukufikelela kumntu ofuna ukuba nguye kunye nobomi ofuna ukuphila.
“Elona cebiso lam lokubonisa umntu ofuna ukuba nguye nobomi ofuna ukuba ngabo kwixesha elizayo kukuba uziveze ngoku njengomntu ofuna ukuba nguye ngenye imini. Ndikucebisa ukuba uhlale phantsi wenze inkcazo eneenkcukacha yesiqu sakho kwaye usebenze yonke imihla ukuze ube yinguqulelo ngokubonisa lo mfanekiso ngoku. Zonke iinkcukacha zobomi bakho kufuneka zizalisekise ikamva lakho njengoko uhlakulela ubomi ophefumlelweyo ukuba uzuze; ukusuka kwindlela olungisa ngayo inkangeleko yakho ukuya kukhetho lokutya olwenzayo ukuya kwimathiriyeli yokufunda oyikhethayo, gcina uhlobo lwakho lokugqibela lobomi bakho engqondweni, utshilo uLauren Kleinman, uMseki-Msebenzi we Umgangatho Hlela.
Ngezi ngcebiso zengcali malunga nendlela yokuphucula indlela yokuphila yobuqu kufuneka ulungele ukungena kunyaka omtsha ogcwele umbulelo, ithemba, isikhokelo, kunye nokuzikhathalela. Nangona kungekho mntu unokuxela kwangaphambili ngemeko yelizwe langaphandle okanye izehlo oza kudibana nazo ngo-2022, unalo lonke ulawulo emhlabeni malunga nendlela okhetha ukubujonga ngayo kwaye ubuphathe ngayo ubomi bakho. Sukuchitha omnye umzuzu uphantsi kuloyiko okanye ukubhideka; endaweni yoko, faka ezi ngcebiso ziphezulu kwindlela yakho kwaye ubone ubomi bakho buguquka bubengcono. Kwaye iindaba ezimnandi: akufuneki ulinde kude kube nguNyaka omtsha ukudala imikhwa enempilo. Kutheni ungaqali namhlanje?